Bilayska Kenya oo qabtay nin watay bam-gacmeedyo - Sabahionline.com
Bilayska Kenya oo qabtay nin watay bam-gacmeedyo Luulyo 06, 2012
Bilayska Kenya ayaa Khamiistii (5-tii Juulaay) waxa ay meel u dhow Bandhiga Beeraha Nakuru ka qabteen nin watay laba bam-gacmeed, wax yar ka hor intii uunan halkaa soo gaarin Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki oo halkaa khudbad ka jeedin lahaa, sidaana waxa sheegay Capital FM-ta Kenya.
Bilayska Kenya oo digniin argaggixiso ku sheegay been-abuur
Heshiisyadii Kenya iyo Itoobiya oo sii socon doona kadib dhimashadii Zenawi
Tuhmanaha ayaa lagu qabtay intii uu socday baaritaan khasab ah ka hor intii uunan galin bandhigga, waxaana lagu xiray saldhiga bilayska Nakuru, iyada oo si dagg-dagg ah loogu soo gudbin doono Nairobi si ay su'aalo u waydiiyaan unguta bilayska ee qaabilsan la dagaallanka argagixisanimada.
Ammaankii carwada lagu dhigayay bandhigga ayaa la sii adkeeyay kadib qabashadaas, iyada oo uu Kibaki-na ugu yeeray dadka Kenya in ay ka midaysnaadaan khataraha. "Marna kama caajisi doono in aan ka adkaano cadawga dalka," ayuu yiri. "Marna nama cabsi-galin doonaan weerarrada arggaggixisadu u gaysanayaan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan iyaga oo taa ula jeeda in ay dadka ku beeraan cabsi iyo argagax."